That's so good, right?: My Third Time – Then I lost Count
My Third Time – Then I lost Count
၁၉၈၅၊တောင်ပေါ်မြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့ တစ်ခုမှာ တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရုံးခန်းတစ်ခုမှာ စာရေးလိုမျိုး ရာထူးနဲ့ သီးသီးသန့်သန့် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ပြီးတော့စစ်တန်းလျားတစ်ခုမှာ တစ်ခြား စစ်သားတွေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ခြေလျင်တပ်ထရိန်နင်ကုမ္ပဏီ ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်တို့ စစ်သားအသစ်တွေ စုဆောင်းရရှိတယ် ပြီးလျှင်သူတို့ကို ခြေလျင်တပ်တစ်ခုရဲ့ အခြေခံတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်လေ။
ဒီနေ့ အပတ်စဉ်အသစ်အတွက် စစ်သားသစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ အစည်းကို တာဝန်တွေပေးအပ်တော့တာ။ ညရောက်လို့ ကျွန်တော့်အိပ်စင်ရှိရာစစ်တန်းလျားကို ပြန်လာခဲ့တာ ဘေးကအိပ်စင်မှာ စစ်သားအသစ်တစ်ယောက်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့နာမည်က ဘိုဆန် ဆန် စတီဗင်၊ အသက်က၂၅နှစ်၊တော်တော်ကြည့်ကောင်းသူတစ်ဦး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတောင့်တောင့်တင်း တင်း ပြီးတော့ ရေချိုးပြီး သူ့အိပ်စင်ရှိရာကို လှမ်းအလာမှာ မြင်လိုက်ရတာက ပေါင်ကြားထဲက ရွှေဖီငှက်ပျော သီးကြီးက တရမ်းရမ်းပေါ့။ သင်တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ ကျွန်တော် သူ့ toy နှင့် ဆော့ကစားချင်စိတ်ဖြစ် မိခဲ့ပါတယ်။
စစ်တန်းလျားဆိုတာ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတာ၊ သူတို့အားလုံး horny ဖြစ်တဲ့အခါ တစ်ခု ခုကိုလုပ်ဖို့ သူတို့လိုအပ်နေကြတာတော့အမှန်။ ကျွန်တော်သိတာပေါ့ သူတို့တွေ ဘာလုပ်ကြမယ်ဆို တန်းကနဲ။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ သူတို့လုပ်တာကို မသိမသာကြည့်ပြီး အသံကိုနားထောင်ဖြစ်နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော် ညဆို သူတို့ ဗုံတံခေါက်သံတွေကို အားလုံးကြားနိုင်ခဲ့သပေါ့။ သင့်အနေနဲ့ စစ်သားတစ်ယောက် Jerking off လုပ်နေတာ မှန်မမှန် အတတ်ပြောနိုင်တဲ့နည်းရှိပါတယ်။ သူပက်လက်အိပ်မယ် ဒူးထောင်ထားပြီး စောင်တစ် ထည်လွှမ်းထားမယ်လေ အဲဒါမှသူ jerking off လုပ်တာကို စောင်က မမြင်အောင်ကွယ်ထားပေး မပေါ့။
အဲဒီလိုနဲ့တစ်ညမှာတော့ စတီဗင် jerked off လုပ်နေတာကို ကြားခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အိပ်စင်ပေါ်မှ ရွေ့လျားသံ လက်ကစားမှုကြောင့် တဖတ်ဖတ်မြည်သံ ၊ ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးညည်းသံနဲ့အတူ ငြိမ်ကျသွားတဲ့ သူ့လှုပ်ရှား သံအားလုံး။
မသိမသာကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီတိုကို အသာချွတ် သူ့ cum တွေကိုသုတ်ပြီးတော့ အိပ်စင်ဘေးက ကြမ်းပြင်ပေါ် အသာလျှောချလိုက်လေရဲ့။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်အိပ်စင်နဲ့ ဝေးရာ ဘက်သို့ တစောင်းလှဲ့လိုက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားပါရဲ့။ ကျွန်တော့်မှာတော့ မျက်လုံးတွေကျယ်ပြီး အိပ်မရတာ အချိန်အတော်ကြာ။
အိပ်ပျော်တာသေချာသွားချိန်မတော့ မီးမှောင်ကျနေတဲ့ စစ်တန်းလျားထဲ စတီဗင်ချထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို စမ်းသပ်ရှာဖွေမိတာပေါ့။ သူ့ဘောင်းဘီတိုကို ကျွန်တော့်စောင်အောက် အသာဆွဲယူတယ်။ တစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုကို မသိဘူးလို့ခံစားရမိချိန်မှာ သူ့ဘောင်းဘီက အနံ့၊ ပြီးတော့ သူ့ရွှေရည်တွေကို လျှာနဲ့ လျှက်မိတယ်။ they were delicious! သူ့ဘောင်းဘီတစ်ခုလုံးပြောင်သွားအောင်လျှက် နောက်ကျွန်တော့် ညီဘွားကို အသာဆွဲကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားရင်း သူ့ဘောင်းဘီပေါ် ပန်းထုတ်ကာ စတိဗ်ရဲ့အိပ်စင် အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြန်ချထားလိုက်ပါတော့တယ်။
သုံးလေးပတ်လောက်ကြာတော့ စစ်သားအသစ်တွေ အပြင်ထွက်ခွင့်ရတဲ့အခါ စတိဗ် အမြဲတမ်း မြို့ကြီးဆီ ဒါမှမဟုတ် တောင်အောက်ကမြို့ထဲကို ဦးတည်တာကြီးပါပဲ။ သူ့ကြည့်ရတာ ငွေကြေးအသုံးအတွက် လက်ထဲ အသင့်ရှိနေတတ်ပုံပဲ။ တနင်္ဂနွေညနေခင်းတွေမှာတော့ နောက်ကျပြီးမှ ပြန်ရောက်လာလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့ စတီဗင်တစ်ယောက် ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ အားလပ်ရက်ကို ဖြတ်သန်းဖို့ အသင့်ပြင်နေဟန် တွေ့ရတာ။ သူ့အ၀တ်တွေကိုမွှေရင်း ဘာတွေစိတ် အလိုမကျဖြစ်နေတယ်မသိ။ "Damn" တဲ့ရေရွတ်သံ ပဲကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လို့လည်း ဘာတွေအဆင်မပြေလို့လည်းလို့ မေးလိုက်တော့ မြို့ထဲသွားဖို့ ပြင်ပြီးကာမှ သူ့ဘောင်းဘီတိုတွေ ညစ်ပတ်နေတာ အ၀တ်အိတ်နဲ့ အပြည့်ဖြစ်နေလို့တဲ့။ သူ့မျက်နှာက လက်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ဘာအကြံရသလဲဆိုတော့ အကယ်၍ ကျွန်တော့်ရဲ့ လျှော်ပြီးသား ဘောင်းဘီကိုငှားပေးမယ်ဆိုရင် $ 1.00 ပေးမတဲ့။ Hey, business is business , သူ့ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဘောင်းဘီတစ်ထည်ကို ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ သူကလည်း အဲဒါကို အသုံးပြုမှုအတွက် ပေးဆပ်လေရဲ့။
မြို့ထဲမှာ သူ့ရဲ့ တစ်ပတ်တာ အနားယူမှုအပြီးမှာတော့ သူ့တန်းလျားကို ပြန်လှမ်းလာခဲ့ရလေရဲ့။ ညချမ်းရောက် တော့ အ၀တ်တွေလဲတယ် ပြီးတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို အသာချွတ်ကာ ကျွန်တော့်အိပ်စင်ဆီ ပစ်တင်ပေးရင်း "Thanks" တဲ့လေ။ ဘောင်းဘီကို ခုတင်နားက အ၀တ်ဟောင်းခြင်းထဲ အသာထည့်လိုက်ရင်း ဘာမှမဖြစ်သယောင်နဲ့ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ရတော့တာပေါ့။ သူ့အိပ်စင်အပေါ်အသာ အယာ ဖြစ်သွားချိန်မှာ ဘောင်းဘီတိုကို အသာကောက်ယူ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အနံ့အသက်လေးတွေကို ဖွေရှာရတာပေါ့ လေ။ Great scent ပါပဲ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရနံ့နဲ့အပြည့်။ အနံ့နဲ့အတူ ရင်ထဲတလှပ်လှပ်ဖြစ်လာစေတာ ကြောင့် .......ဟား ဟား ဗုံတီးပြီး ဘောင်းဘီပေါ် ပန်းထုတ်လိုက်ပေါ့တစ်ခါ။
၁၉၉၀နှစ်လွန်တွေတုန်းက စစ်သားတွေ တစ်ပတ်၆ရက်အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
စနေနေ့ဆိုတာ အုပ်စုလိုက် သွားလာလှုပ်ရှား အတူအပြင်ထွက်ဆိုတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ပါပဲ။ စနေနေ့ မနက်ခင်း တန်းစီစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ စတိဗ်နည်းနည်းတော့ မျက်နှာပျက်နေပါရဲ့ ရက်သတ္တပတ်ကုန်ဆုံးတဲ့ရက်တွေ မှာ အသွားအလာကို နည်းနည်း ကန့်သတ်ခံရလို့လေ။ အဲဒီလိုကန့်သတ်ခံရခြင်းက အကျပ်ကိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေသပေါ့လေ မြို့ထဲသွားပြီး အပျော်ရှာဖို့ စတိဗ် ကျပ်ခံရတာပေါ့....ဟာ ဟ။
တနင်္ဂနွေနေ့လည်လေးမှာ ကျွန်တော် တန်းလျားထဲနေနေစဉ် စတီဗင်က သူနဲ့အတူ အပြင်ကိုလမ်းထွက် လျှောက်ချင်ပါသလားတဲ့ သူနဲ့အတူပေါ့။ ဒီတော့ သူရယ် ကျွန်တော်ရယ်လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း အသာ ရွေ့လာရင်း စကားတပြောပြောပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ စစ်တပ်တန်းလျားရဲ့အစပ်ဟာ တောအုပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် နှစ်ဦးသားတောထဲ ခြေစင်္ကြာဖြန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ ပူနွေးတဲ့ လေပြေတွေ တသုန်သုန်တိုက် ခတ်နေတဲ့ နွေဦးနေ့လေးမှာ စတိဗ်နဲ့ ကျွန်တော်အတော်ကြီးတဲ့ ၀က်သစ်ချပင်ရဲ့ ခြေရင်းမှာထိုင်ရင်းအနား ယူဖြစ်ကြပါတယ်။ အနားယူတာမကြာပါဘူး လိင်ကိစ္စအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ပြောတော့တာပါ။
စတိဗ်ပြောပြခဲ့တာတွေက အမှန်တွေလားတော့မသိ ခပ်ကြွားကြွားတော့ ဖြစ်တာအမှန်။ကောင်မလေးတွေကို ဘယ်လိုဆွဲခဲ့တာ ကောင်မလေးတွေက သူ့ကိုတွေ့ဖို့ ဘယ်လိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေကို ခပ်များများ အလေး ပေးပြောပါတော့တယ်။ ဒီတပ်ကိုရောက်ပြီး စနေတနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်တွေမှာ မြို့ထဲသွားပြီး ဘယ်လို သောင်း ကြမ်းတာဆိုတာကိုရော ပြောပြန်ပါရဲ့။ သူဟာလိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒတွေမှာ အာသာပြင်းတဲ့ ဒီလိုလူမျိုး ဆိုတာ သူ့စကားတွေက သက်သေခံနေပါရဲ့လေ။
သူစကားပြောတာမောသွားပြန်တော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလှည့် ပေါ့လေ။ တောင်ပေါ်စခန်းတစ်ခုမှာ ရေခဲပြင်စကိတ်သွားစီးရင်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပုံ၊ သူမဟာကျွန်တော့်ရဲ့ အဦးဆုံး လိင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုတာကိုရော ၊ အားရပါးရ အတူပျော်ပြီးမှ camp ကိုပြန်လာဖြစ်ကြောင်းလည်းရှင်းပြရသေးသပေါ့။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြောပြရရင် ရင်ခုန်တာလည်းပါတယ် အဦးဆုံးအတွေ့အကြုံဆိုတော့ မရှောင်ကြဉ်နိုင်တာ လည်းပါခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
သူနဲ့ပျော်ပါးပြီး "pro station" ကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ "pro station" ထဲရောက်တော့ ဆေးမှူးကို ကျွန်တော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် အိပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါ သူက အခန်းထဲခေါ် ဘောင်းဘီရှည်တွေ အတွင်းခံတွေကိုချွတ်ခိုင်းတယ်။
ကျွန်တော်သူပြောတဲ့အတိုင်းချွတ်ပြီးချိန်မှာ ဆေးမှူးက ကျွန်တော့်ရွှေပန်းရယ် ရွှေဥရယ် ဆေးဆပ်ပြာနဲ့ ရေခပ်နွေးနွေး အသုံးပြုကာ ဆေးကြောပေးခဲ့ပြန်တယ်။ တကယ့်ယောက်ျားစစ်စစ်က အစစ်အမှန်ကို ဆေးကြောပေးနေတာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အားလုံးပြီးချိန်မတော့ အစိမ်းရောင်ခရင်မ်တချို့ကို ဘူးတစ်ခုထဲကနေ ညှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အတံနဲ့ ဥတစ်လျှောက် ခပ်သွက်သွက် ပွတ်ပြီးလိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ပိတ်ပါးစ ခပ်များများနဲ့ ရစ်ပတ်ထားပေးဖို့ပြောခဲ့ပါရဲ့။ ကအပြန်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို ထုပ်ပိုးပြီး လျှောက်လှမ်းခဲ့သပေါ့။ နောက်တနေ့အထိ ရေမချိုးဖို့လည်း သတိ ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ညလုံး ကပ်စီးစီးနဲ့ဗျာ၊ တန်းလားထဲက ကောင်တွေ ကျွန်တော့်ဆီက ဆေးနံ့ တွေရပြီးတော့ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိသွားနိုင်တယ်။ "I was so proud!"
ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းအဆုံး ကလည်းနောက် cock story တစ်ပုဒ်ကို စတင်ပြောပြတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပဲအိပ်ဖူးတာဆိုတော့ cock story တွေပြောဖို့ အမြဲထွက်ပြေးနေရတာ။ ဒါပေမဲ့ စတိဗ် အတွက်ကတော့ ပြောဖို့အပြည့်။ နှစ်ဦးသားစကားတွေပြောဖြစ်နေကြရင်း စတိဗ်ထလာတာကို မြင်နေရပေမဲ့ မျက်စိအကြည့်ကို သူ့ဟာဆီကနေ မလွှဲဖြစ်ပါ။
ကျွန်တော်သူ့ပေါင်ကြားကို စိုက်ကြည့်မိကြောင်းသူသတိမူမိသွားချိန်မတော့ ဘောင်းဘီကို အသာလျောချ သူ့ငပဲကိုကိုင်တွယ်ပြရင်း ကြည့်စမ်းပါဦး ပျိုမေ့အသည်းစွဲတဲ့ သူ့ဟာကိုတဲ့လေ။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ငပဲကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေချိန်ဆိုတော့ ဘယ်အလွတ်ခံပါ့မလည်း အခွင့်အရေးကို။
အဲဒီနောက်တော့ ကောင်မလေးတွေဆီက blowjobs လုပ်ပေးတာကို ဘယ်လိုအရသာခံခဲ့ပုံ၊ ခပ်ကဲကဲ အမျိုး သားတွေဆီကလည်း blowjobs လုပ်ပေးတာကို ဘယ်လိုအရသာရှိခဲ့ ကြောင်းတွေကို ကြွားတာလည်း ဆောင်းပါးရိပ်ခြေပြောသလားမသိ ပြောပြန်တယ်။ သူ့ငပဲကို စုပ်ပေးရင်ပဲကျေနပ်ပြီ စုပ်ပေးသူက ယောက်ျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပဲ။
ဒီအကြောင်းစကားဆက်နေစဉ်မှာ စတိဗ်သူ့ဘောင်းဘီထဲလက်သွင်းရင်း ငပဲကိုဆွနေတာ ဘောင်းဘီက နိုင်လွန်သားဆိုတော့ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်ပြီး ထလာတာကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပေါ့။ ကိုင်တော့မယ် တကဲကဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို အသာဆွဲယူပြီး သူ့ဒစ်ပေါ်တင်ပေးတဲ့အခါ အသာညှစ်ကြည့်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ စတီဗင်တစ်ယောက် စိတ်ထနေတာ ပြင်းထန်ပုံပေါ်ရဲ့ ပြုမူပုံတွေကိုက။ ကျွန်တော်ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
စတိဗ်ကတော်တော်တော့ အသင်းသားပါလား။ ကျွန်တော့်စိတ်ကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး သူဘာ လုပ်စေချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ဘာသာအလိုလိုလုပ်ဖြစ်အောင်စွမ်းပါတယ်။ ဒါကို သဘောမပေါက် မိခင်မှာပဲ သူ့ရွှေပန်းကို ငုံစုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ထိပ်အရေပြား ဖြတ်မထားတာကိုက ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသလို သူ့ငပဲရဲ့ taste ကလည်း great ပါ။ "ဖြည်းဖြည်းသက်သာစုပ်ပေးပါလား" ဆိုလေတော့ ကျွန်တော့ ပညာတွေ အစွမ်းကုန်သုံးပြီး ငြင်ငြင်သာသာ ပြုစုပေးလိုက်တာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတဲ့အထိ။ သူ့လက်တွေ ကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး ကျွန်တော့်ကျောပြင်ကို ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်ပြီး တင်ပါးဆုံတွေကိုလည်း ဖျစ်ညှစ်ပြန်တယ်။
"Get ready!!!" ဆိုတဲ့ သူ့အသံနှင့်အတူ ပါးစပ်ထဲကို အပြည့်ပန်းထုတ်လိုက်တော့တာ။ ပါးစပ်နဲ့အပြည့်ပါပဲ။ ဒီလို ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဒစ်ကို sucking လုပ်ခဲ့တာ တတိယအကြိမ်မြောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တန်းလျား ကို ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ သူကပြောသေးတယ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ဘာမှ မဟဖို့ပေါ့။ တပ်တွင်း ဧရိယာ လည်းရောက်တော့ ကျွန်တော့်ပုခုံးကို အသာဖက်လိုက်ရင်း သူကောင်းကောင်း အရသာ တွေ့ခဲ့ကြောင်း။ ညလေးသုံးလေးညဖြတ်သန်းအပြီး စတိဗ်က သူနဲ့အတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ပြောပြန်ရော။ ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင် အတူသွားကြတယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ ဆိုလိုတာက အပြန်လမ်းခရီးရဲ့ ကြာချိန်ကို သူကြာကြာဆွဲဆန့် ချင်ပုံပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သစ်တောမှာ ခဏတာအဆုံးသတ်ဖြစ်ကြပြန်ရော။ စတီဗင်က သူ့ငပဲကို ပြန်ပြုစုပေးပါဦးတဲ့ ပြောပြန်တယ်။ ဒီငနဲလေးကို တကယ်သဘောကျလာမိသလို သူ့ငပဲခပ်ကြီးကြီးကို စုပ်ရတာလည်း ကြိုက် လာပြီ။
ကျွန်တော့်အဖြစ်က အသက်ငယ်လို့ ရူးသွပ်မိတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သူ့ညီဘွားချောချောလေးအပေါ်ချစ်မိ သွားမိပြီထင်ပါရဲ့။ သူအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းကျွေးတယ်။ ဘယ်နေရာသွားသွား ကျွန်တော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေရာစုံအတူသွားစပြုလာပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူအပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီး နောက်ပိုင်း မြို့ကြီးဆီကိုရောက်နေ တာချည်းပါပဲ။ သူ့မှာပိုက်ဆံတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ မရှိ ဒါကြောင့်မြို့ကြီးဆီသူနဲ့အတူ လိုက်ဖို့ဘယ်တော့မှ မခေါ်တော့ပါဘူး။
သူ့ညီဘွားနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့တာ ရက်ပတ်များစွာကြာလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ မြို့ကြီးထဲကို သွားခွင့်ရတာနဲ့ သူသွားခဲ့တာပါပဲ အပတ်တိုင်း။ camp ကို သူပြန်လာတဲ့ အချိန်တိုင်း hot story တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါလာတာချည်းပါ။ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ့ဆုံပြီး ညတွေကို ဘယ်လိုအဆုံးသတ် ခဲ့ကြောင်းတွေ အပါအ၀င်ပြောပြဖို့။ ကျွန်တော် ဒီကောင်မိန်းမလှတွေအများကြီးကို fuck ဖို့ရှာတွေ့နိုင်တာ ကံကောင်းလွန်းတယ်လို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်။ တစ်ဖန်သစ်တောထဲကို လမ်းအတူလျှောက်ဖို့ခေါ်မည် ပြီး သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ အဆုံးသတ်မည်ဆိုတာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီနေရာရောက်ရင် သူ့ကို blowjobs လေးပေးဖို့ ပြောနေကျ။ ကျွန်တော်ကလည်း အသေအချာကို လုပ်ပေးတတ်ခဲ့တာ ကောင်ချော လေးရဲ့ ပစ္စည်းကိုပေါ့။
တစ်ခုသော တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အိပ်ယာကအနိုး စတီဗင်ရဲ့ အိပ်စင်ကိုလှမ်းအကြည့် အိပ်စင်မှာ သူရှိမနေဘူး။ ညက သူ့အိပ်စင်မှာ အိပ်စက်ခဲ့ပုံမရပါဘူး။ Steve was A.W.O.L.
စစ်ဗိုလ်တွေအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအခန်းဆီသို့ ကျွန်တော်အလုပ်သွားစဉ် ခဏအ၀င်မှာ တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးက တပ်တွင်းအရာရှိကိုပြောနေတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့တပ်ထဲက တစ်ယောက်က မြို့ကြီးက ဂျေးထဲရောက်နေသတဲ့။ ကျွန်တော်စတင်ပြီး ပူပန်စပြုရပြီ စတီဗင်အတွက်လေ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ ကျွန်တော်ခေါင်းခဲစပြုပြီ။ တပ်ကြပ်ကြီးက စတိဗ်ရဲ့ အ၀တ်တွေ အိတ်တွေအားလုံးကို စာရင်းလုပ် ပြီးတော့ စတိုခန်းထဲသိမ်းဆည်းလိုက်တာကိုး။ တကယ့်ကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ရပြီပေါ့ ကျွန်တော့်ဟန်နီချစ်ချစ် လေးအတွက်၊ သူဘာတွေဖြစ်ခဲ့လည်းဆိုတာ ကိုသိချင်နေတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အမှန်တရားကပေါ်ထွက်လာတော့တာပါ။ စတိဗ်တစ်ယောက် ဂျေးထဲအောင်းခဲ့ရတာ အမှန် ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာဟိုမိုလောကမှာ အတော်သောင်းကျန်းခဲ့လို့ပါပဲ။ သူတို့ပိုက်ဆံကိုယူ တယ်၊ ဂေးတစ်ချို့ကိုရိုက်နှက်ပြီး ငွေယူတယ်။ အခုတော့ ဘာကြောင့် သူ့ဆီမှာငွေ အမြဲမပြတ်ရှိနေရတာ နားလည် သွားပြီ။ ဒီအကြောင်းကို သိပြီးနောက်တော့ ကျွန်တော်သူနဲ့ မပတ်သက်တော့ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ပေါ့..... လာထား။
စတိဗ်ထောင်ထဲရောက်သွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ထောင်ကျသူအနေနဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတွေ၊ ရလဒ်ကောင်း တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စစ်တပ်ထဲကိုပြန်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ လက်ခံစဉ်းစားမှာပါ။ စတိဗ်ထောင်ကထွက်ပြီးနောက် တော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လာတယ် Basic Training ပြန်ယူရဖို့။ အင်း....သူနဲ့ပြန်ဆုံချိန်မတော့ စတိဗ်က ထောင်လူထွက်အသစ်စက်စက်လေးပေါ့။ နားလည်ခဲ့ရပါတယ် သူဘာကြောင့် ဒီလိုကောင်လေးမျိုးဖြစ် ရတယ် ဆိုတာ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ သူ့အတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ် သူ့အတွက် အထာကျနေခဲ့ပြီပဲ။ ကျွန်တော် အကြိတ်ခံခဲ့ရတာပ။ ဘယ်တော့မှ သူ့ကိုသွားမတွေ့တော့ပါဘူး။
အပြေးလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့တန်းလျားက နောက်ထပ်စစ်သားကောင်ချောလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရပြန်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ပစ်မှတ်အတွင်း သူဝင်လာဖို့ အစီအစဉ်ချပစ်ခဲ့တာဘေ။ တစ်ညနေခင်းမှာ ရေတွင်း ရှိရာကို အတူသွားရင်း စကိတ်ကွင်းမှာ ကျွန်တော်ဆုံခဲ့တဲ့ ချခဲ့တဲ့ကောင်မလေး အကြောင်းပြောပြဖြစ်တယ်။
နောက်တော့သူရယ် ကျွန်တော်ရယ် စကိတ်ကွင်းဆီ သူမကိုအရှာထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ အဲဒီကောင်မလေးက စကိတ်ကွင်းဝန်းကျင်မှာပဲနေတာဗျ။ ကျွန်တော်တို့အရွယ် အတော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပါပဲ။ သူမနဲ့အတူ စကိတ်အူစီးပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် မြို့ထဲကို စတင်လျှောက်လှမ်းကြတယ်။ သွားတဲ့လမ်းမပေါ်ရှိ သူ့ကိုအရင်က ချခဲ့တဲ့အဆောက်အဦးကိုမြင်တော့ အလွတ်ဖြစ်နေဆဲ ဒီအိမ်ကြီးထဲကို သွားမလားလို့ မေးလိုက်တော့ သူမက အိုကေတဲ့။ ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ မြင်းတွေအတွက်ထားတဲ့ ကောက်ရိုး တုံးကြီးတွေကိုတွေ့ပြန်တော့ အိပ်ယာသဖွယ်ခင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့ အိပ်ယာကြီးပေါ့ဗျာ။ သူမရဲ့ဘောင်းဘီတွေကိုချွတ် ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုလည်း ချွတ်ပေါ့တစ်ခါ။ မကြာခင်မှာပဲ တဘန်းဘန်းရိုက်သံနဲ့အတူ ကောင်မလေးကော့ကော့တက်သွားပုံ၊ ကျွန်တော့်ခါး ဇကောဝိုင်း နေပုံတွေ မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကောင်ကတော့ အပြင်မှာ အသင့်အနေအထားနဲ့ မျက်လုံး ရှင်ရှင် ထားနေလေရဲ့။ ကောင်မလေးအပေးကောင်းတော့ သိပ်မကြာပါဘူး ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပြီး ပြီးခဲ့ပြန်တာ။ အ၀တ်လဲပြီးထွက်ခဲ့လိုက်တယ် အပြင်ကို။
အရည်တွေအများကြီးထွက်ခဲ့ရသလိုခံစားရတယ် အပြင်ကစောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်ဆီအသွားမှာ။ မင်းလည်းချချင်ရင် သွားလေအတွင်း ကိုလို့ပြောလိုက်တော့ ဆရာသမားက အပေါ်ခေါင်းရော အောက်ခေါင်း ရော တငြိမ့်ငြိမ့်။ အထဲဝင်သွားပြီး မကြာပါဘူး ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်သံတွေ နဲ့အတူ အင်း အားဖြစ်ကြတာ ကြားရတယ်။ ကောင်မလေးနဲ့အတူ သူအပြင်ထွက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကောင်မလေးအိမ်ရှိရာမြို့ ထဲလိုက်ပို့ပေးဖြစ်တယ်။ သူမက ငွေတော်တော်လေးလိုနေတဲ့ အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောတော့ နှစ်ဦးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
စစ်သားကောင်လေးရယ် ကျွန်တော်ရယ်ကားစီးပြီး camp ဆီပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ကို the "pro" station အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီး ကျွန်တော်အရင်က တခြား "pro" ဆီသွားခဲ့ဖူးကြောင်းကိုရောပေါ့။ သူကတပ်တန်း လျားကို ပြန်လျှောက်သွားတော့မယ် "pro" ဆီမသွားချင်ဘူးတဲ့လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ယောက်ျား မာန်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့လို့ကြိုက်တယ်သွားရတာ။
နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ဖျားတယ်လေ သူ့ခမျာ ကာလသားရောဂါရသတဲ့။ တန်းလျားကို သူပြန်သွားပြီး သူ့အ၀တ်တွေထုတ်ပိုးကာ ဆေးရုံဆီ သတင်းပို့ဖို့ သွားလေရဲ့။ သူကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောတာကတော့ တပ်ကို အဲဒီကောင်မလေးအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ဘယ်တော့မှ မပြောပြဖြစ်ခဲ့တာက ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ အဲဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ထဲကို ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ အဖြစ်အပျက်တွေ အကြားအမြင်တွေ ရပြီးနောက်ပိုင်း ဂရုတစိုက်ကြည့်ပါတော့တယ် ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံမဲ့သူတွေအပေါ် သတိအနေအထားနဲ့ပေါ့။
ဒါတွေကိုပြန်ပြောင်းသတိရနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်တွင်းအမှုထမ်းစဉ်က အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မျှဝေလိုရင်းပါ။ ရေးခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေက အမှန်တွေသာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ငယ်နုစဉ်အချိန်က အဖြစ်တွေပါပဲ။ စာဖတ်သူတွေဆီက ဝေဖန်အကြံပြုတာ တွေကိုလိုချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ။
Posted by Alex Aung at 5:11 PM
No Regret Part III
No Regret (Part II)